Inani Lokumaketha Okuqukethwe | Martech Zone
NgoLwesine, July 7, 2011 NgoLwesine, Juni 18, 2015 Douglas Karr
Lokhu ukubukeka okuhlukile kokumaketha kokuqukethwe. Sabelane nge Igridi Yokuqukethwe izolo, kudingidwa ukuthi uhlobo ngalunye lokuqukethwe lungasetshenziswa kanjani ngamasu. Le infographic idinga isu eliqine ngokwengeziwe ngoba indlela yokuziphatha kwabafundi iyashintsha… iba nokungabaza nokugcina imali.
Ngalokhu I-Alinean I-Infographic: Ukuthola ukubuyiselwa kokutshalwa kokuqukethwe kokuqukethwe kudinga amasu namathuluzi agxile kakhulu, avusa inkanuko, futhi abaluleke kakhulu ukuze ulwe ngempumelelo ne-Frugalnomics ™ - ukuxhuma, ukuzibandakanya nokuthengisa kulolu hlobo lomthengi olusha.
Tags: i-alineanisabelomali sokumaketha okuqukethweamasu wokuqukethweokuqukethwe okugxileinkanukobuyela ekutshalweni kokuqukethweInani